Mayelana NATHI - Daking Jewellery Co., Ltd.
Kutholakala eZhangjiagang, idolobha eliyitheku eliseduze kweShanghai, eduze noMfula iYangzi, iZhangjiagang City Daking Jewellery Co, Ltd. yasungulwa ngonyaka we-1992. Besibambe iqhaza ekutshaleni amaparele, ukukhiqiza nokwakha nokuthumela ubucwebe bamaparele, ubucwebe besiliva, ubucwebe begolide njenge kanye nobucwebe bamatshe obuyigugu elincane kanye nobucwebe bemvunulo yemfashini iminyaka engaphezu kwengama-28.
Sinepulazi lethu lokutshala amapharele elinamakhava amanzi angaphezulu kwamamitha-skwele angama-667,000, kanye nendawo yokukhiqiza, futhi amandla ethu okukhiqiza waminyaka yonke afinyelele ngaphezu kwamathani we-100 metric. Senza yomibili imikhiqizo eqediwe kanye nemikhiqizo esiphelile.Imikhiqizo yethu yobucwebecwebe ihlukahlukene, kufaka phakathi imigexo, amasongo, amacici kanye namasethi wobucwebe.Ingaphezu kwamakhulu ayisishiyagalombili imiklamo. Ngokuthuthuka kweminyaka engaphezu kwamashumi amabili, inkampani yethu ilethe ubuchwepheshe bokupholisha nokudaya obuthuthukile futhi yakhe umugqa wokwenza, kanye nohlelo oluhlanganisiwe lokulawulwa kwekhwalithi nokuphathwa.Futhermore, inkampani yethu inamaqembu asebenza kahle. ukwaneliseka okufuywayo naphesheya kwezilwandle.Kweminyaka engama-23 edlule, imikhiqizo yethu ithunyelwe emazweni amaningi emhlabeni wonke.Ngokunikeza amanani afanele kanye nensizakalo enhle kakhulu, inkampani yethu ithole ukunconywa kumakhasimende ethu emhlabeni wonke.Lokhu kusisiza ukuthi sizuze idumela eliphakeme ezimakethe ezifuywayo nezaphesheya kwezilwandle.Sandisa ngokungaguquguquki isikali sebhizinisi lethu futhi sizama konke okusemandleni ethu ukunikela ngemikhiqizo engcono nengcono kuwo wonke amakhasimende.Sibheka esikhathini esizayo, sizokwenza imizamo engapheli yokuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme. bazibophezele ukufaka isandla embonini yezobucwebe ngokuthembeka okuhle, umnikelo nomoya wentshiseko.
Ukudweba ubucwebe Co, Ltd.
Sisebenza ngobuciko beparele, imikhiqizo yegobolondo, amatshe ayigugu amancane njalonjalo
Ngokuhambisana nenqubomgomo yebhizinisi "ephethe abathengi, ukuwina nabathengisi", inkampani ilawula ngokuqinile ikhwalithi yemikhiqizo.
Le nkampani inamathela ebaluleke kakhulu ekuhlanganisweni okuphelele kobucwebe bendabuko nobesimanje, izinzuzo nezinto ezintsha, ubuchwepheshe nobuciko.
Sinomqondo omusha wokuklama, iqembu lokusebenza elisebenza kahle, elihlala linamathela ekusebenzeni okujwayelekile, insizakalo yobuqotho, izidingo nokwaneliseka kwamakhasimende kwasekuqaleni.
Isakhiwo somkhiqizo wale nkampani sicebile, ukwehlukahluka, ukukhiqizwa kwemigexo, namasongo, namasongo, imihlobiso elengayo, amacici, izindandatho, amaqakala, amasudi ezigaba eziyisishiyagalolunye, ingqikithi yezitayela zemikhiqizo ezingaphezu kwezingu-8000.
Le nkampani inomqondo omusha wokuklama, iqembu elisebenzayo elisebenza kahle, elihlala linamathela ekusebenzeni okujwayelekile, insizakalo ethembekile, ibeke izidingo zamakhasimende nokwaneliseka kwasekuqaleni, inqobile ukunconywa kwamakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe.
Indawo yamanzi e-Aquaculture
+ amamitha ayisikwele
Abasebenzi be-Daking basalandela umoya wokubekezela, ukusebenza kanzima nokuphelela
Aphi Amehlo Akho
Sinamathela esimisweni esithi "ikhwalithi yokusinda, idumela lokuthuthuka"
Ngokwethembeka kumakhasimende nokunakekela umsebenzi, silwela ukuqhubeka phambili nomfutho webhizinisi.
Uma unesithakazelo kunoma imiphi imikhiqizo yethu, sicela uxhumane nathi ngesikhathi. Sithemba ngobuqotho ukubambisana nawe ukuze ngokuhlanganyela sithuthukise imakethe yobucwebe futhi sakhe ikusasa eliqhakazile lomkhakha wobucwebe.